अशुभ होइन आँखा फरफराउनु, वास्तविक कारण यस्तो – Enepali Samchar
January 25, 2021 adminLeaveaComment on अशुभ होइन आँखा फरफराउनु, वास्तविक कारण यस्तो
काठमाडौं– प्राय: हामी आँखा फरफराउनुलाई अन्धविश्वाससंग जोडेर हेर्ने गछौं । प्राय: मानिस यसलाई अशुभ पनि मान्छन् । दाहिने आँखा परफरायो भने यस्तो हुन्छ, देब्रे आँखा फरफरायो भने यस्तो हुन्छ भनेर कुरा पनि हुन्छ । तर के वास्तवमा पनि त्यस्तो हुन्छ होला त ?
वास्तववता चाहिँ के छ भने आँखा फुर्फुराउनु स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित छ ।
शरीरको कुनै पनि अंगका मांसपेशीहरु फुर्फुराउनु सामान्य कुरा हो ।
जब मांसपेशी संकुचन हुन्छ, तब ती अंगहरु फरफराउन थाल्छन् ।
हाम्रो शरीरका मांसपेशी त्यस्ता फाइबरबाट बनेका हुन्छन्, जसलाई कोषिकाहरुले नियन्त्रण गर्छ ।
कोषिकाहरुलाई नोक्सान पुगेको खण्डमा मांसपेशीहरु फरफराउन थाल्छन् ।
सामान्यतया मांसपेशीहरु फरफराउनु कुनै चिन्ताको विषय होइन, तर पनि कहिलेकाहिँ यो गम्भिर पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तो स्थितिमा तपाईंले डाक्टरसंग सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आँखाको मांसपेशी जब ऐठन्छ अर्थात बटारिन्छ, तब आँखा फरफराउन थाल्छ ।
त्यस्तो ऐँठन आँखाभन्दा ठिक माथि अथवा तल्लो दुबै भागमा हुन सक्छ ।
केही मानिसमा यो अति नै सामान्य हुन्छ भने बसैमा फरफराउने क्रम अत्यधिक हुन्छ ।
तिव्र गतिमा आँखा फरफराउदा हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई ब्लेफेरोस्पाज्म भनिन्छ ।
आँखा केही सेकेन्डदेखि एक अथवा दुई मिनेटसम्म फरफराउन सक्छ ।
यस्तो समस्या केहि दिनसम्म पनि रहन सक्छ ।
आँखा फरफराउँदा कुनै किसिमको पीडा हुँदैन र यो आफैं ठिक हुन्छ ।
कहिलेकाहिँ आँखा बिना कारण फरफराउन सक्छ, तर कहिलेकाहिँ कुनै कारण पनि हुन सक्छ ।
जस्तै आँखा चिलाउनु, आँखामा दवाव हुनु, थकान, नीद्रा पूरा नहुनु, शारीरिक दवाव, तनाव, कुनै औषधिको साइड इफेक्ट, सुर्ती, क्याफीन अथवा अलकोहलको धेरै सेवन, आँखा सुख्खा हुनु, आँखा सुनिएमा र कन्जक्टिभाइटिस हुँदा पनि आँखा फरफराएर धेरै दुस्ख दिन्छ ।
यदि तपाईंको आँखा फरफराउने समस्या छ भने त्यसको कारण तपाईंको आँखा कमजोर हुन सक्छ र तपाईंलाई हेर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
केही असामान्य केसमा यसमा दिमाग र न्यूरोलजिकल डिसअर्डरसंग सम्बन्धित रोगको संकेत हुन सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा आँखा फरफराउनु अन्य केही लक्षणहरुसंगै हुनसक्छ ।
यसबाहेक अनुहारको मांसपेशी (फेशियल पाल्सी) मा हुने समस्याका कारण पनि आँखा फरफराउन सक्छ ।
फेशियल पाल्सी अनुहारको एक प्रकारको पक्षाघात हो ।
आँखा फरफराउनुको कारण डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया, मल्टिपल स्केलेरोसिस, पार्किन्सन डिजीज र टरेट सिन्ड्रोम जस्ता नर्भस सिस्टमसंग सम्बन्धित राग पनि हुन सक्छ ।
आँखा फरफराउनु कुनै गम्भिर स्थिति त होइन, तर सामान्यतया केवल यही समस्याका कारण डाक्टर कहाँ जानु आवश्यक छैन ।
यद्यपि, तपाईंले केही स्थितिमा भने डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सामान्यतया आँखा फरफराउनु आफैं ठिक हुन्छ, तर यदि लामो समयसम्म यो समस्या भइरह्यो भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा केहि परिर्वतन गर्नु आवश्यक छ ।
क्याफीनको कम सेवन, पर्याप्त निद्रा, आँखा फरफरायो भने तातो कपडाले सेक्ने, तनाव नलिने, धुम्रपान, मदिरापान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने ।
प्रहरीले एकै ठाउँ २७ घण्टा ढुकेर यसरी समात्यो चो,रीको मोटरसाइकल
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए ३० बर्षिय प्रेम , मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला !
नागार्जुनबाट पनि निकाल्छौँ भन्थे, तर ज्ञानेन्द्रले आफैँ छाडे अर्को दरबार
भागरथीको बला,त्कारपछि ह,त्या गरेको दिनेशले स्वीकारे,दिनेशको सूचनाका आधारमा भेटियो घडी